September 16, 2021 - Babal Khabar
Tuesday, October 19www.babalkhabar.com : For your kind information
Sep162021 by बबाल खबरNo Comments
यी महिला, जो ४० वर्षदेखि निदाएकी छैनन् ! यस्तो छ रहस्य
सबैभन्दा पहिले माथि follow गर्दिनुहोला , हामी कतिबेरसम्म नसुतिकन बस्न सक्छौं ? अधिकतम २४ घण्टा ? यो पनि धेरैले सक्दैनन् । तर एक महिलाले आफू विगत ४० वर्षदेखि नसुतेको दाबी गरेकी छन् । चीनकी यी महिलाको यो दाबी चिनियाँ मिडियाले प्रकाशित गरेका छन् । चीनको हेनान प्रान्तकी ली झान यिङ्गले आफू ४० वर्षदेखि नसुतेको दाबी गरेकी हुन् । उनको यो दाबीलाई उनका श्रीमान् र छिमेकीले पुष्टि गरेका छन् । आफू ५ वा ६ वर्षको हुँदा अन्तिम पटक निदाएको उनलाई स्मरण छ । अहिले उनी ४५–४६ वर्ष पुगिसकेकी छिन् तर निद्रा लीका लागि पुरानो स्मृति बनेको छ । ली आफ्नो समुदायका लागि एक सेलिब्रिटीजस्तै बनेकी छिन् । दिउँसो र रातैभरी नसुतिकन बस्न सक्ने भएकोले उनलाई धेरैले ‘अचम्मको व्यक्ति’ को रुपमा हेर्ने गर्छन् । अडिटी सेन्ट्रलका अनुसार केही वर्षअघि उनको दाबी परीक्षण गर्न उनका केही छिमेकीले रातको समयमा तास खेल्न उनलाई च
श्रीमान् ‘कुरूप’ भएको भन्दै पूर्व प्रेमी मार्फत् यसरी जन्माइन् बच्चा !
सबैभन्दा पहिले माथि follow गर्दिनुहोला , अन्य कुरामा उत्कृष्ट तर बाहिरी आवरणमा ‘कुरू'प’ श्रीमानमार्फत् जन्मिने सन्तान भयानक हुने डरले घानाकी एक महिलाले आफ्ना ‘निकै सुन्दर’ पूर्व प्रेमी मार्फत् तीन सन्तान जन्माएकी छिन् । अफ्रिकी सोसल मिडियामा सार्वजनिक भएका खबर अनुसार घानाकी एक महिलाले हेर्दा खासै राम्रो नभएपनि निकै सफल, मिहिनती र माया गर्ने व्यक्तिसँग विवाह गरेकी थिइन् । सुन्दरताका लागि निर्धारण गरेको उनको मापद ण्डमा खरो उत्रन नसकेका उनका श्रीमानको स्वरूपले खासै समस्या निम्त्याएको थिएन तर जब उनीहरूले सन्तानको योजना बनाए तब ती महिलालाई आफ्ना सन्तान श्रीमान् गोता जाने हो कि भन्ने पिरले गाँज्यो । उनलाई आफ्नो श्रीमानको सबै कुरा मन पर्दथ्यो तर सन्तान ‘कुरूप’ जन्मने हुन् कि भन्दै उनले जोखिम मोल्न नचाहेको बताइन् । त्यसैले उनले श्रीमानसँग सहवास गरेपछि गर्भनिरोधक औषधी नबिर्सी सेवन गर्
मृत्यु हुनुभन्दा पहिले अभिनेता सिद्धार्थले लेखेका थिए यस्तो मन छुने अन्तिम ‘पोस्ट’
सबैभन्दा पहिले माथि follow गर्दिनुहोला , मृ' त्यु हुनुभन्दा पहिले अभिनेता सिद्धार्थले लेखेका थिए यस्तो मन छुने अन्तिम ‘पोस्ट’ जुन भाइरल… अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लाको निध'न भएको छ। हृ'याघा'तबाट उनको नि'धन भएको हो । मुम्बईको कपुर अस्पतालले ४० वर्षीय सिद्धार्थको नि'धनको पुष्टि गरेको हो । भारतिय मिडिया एबीपीका अनुसार बुधबार राति सुत्नुअघि केही औषधि आएका शुक्ला बिहान बे'होस अवस्थामा देखिएका थिए । अ'स्पतालले हृ'दयाघा'तबाट उनको नि'धन भएको जनाएको छ । उनी रियालिटी शो र सिरियलहरुमा निकै चर्चित बनेका थिए । सिद्धार्थ बिग बोस सिजन १३ का विजेता हुन् । उनी बालिका बधुबाट चर्चामा आएका थिए । उनको नि'धन प'श्चात उनको अन्तिम इन्स्टाग्राम पोस्ट भाइरल भइरहेको छ । उनले गत अगस्ट २४ मा तस्बिर सेयर गर्दै फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले लेखेका छन्, ‘सबै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरुला
हास्य टेलिश्रृंखला सक्किगोनीमा किन देखिन छोडे अर्जुन घिमिरे ‘पाडे’ ? यस्तो छ कारण
सबैभन्दा पहिले माथि follow गर्दिनुहोला, ‘कतै तपाईंहरूको सक्किगोनि पनि भित्रभित्रै त फु’टेको त हैन ? अर्जुन घिमिरे पाँडे नभएको सक्किगोनि पनि सक्किगोनिझैं भएको छ। हामीलाई पाँडे जसरी नि चाहियो।’‘पाँडे खोई चाइयो, नुनबिनाको तरकारीजस्तै भयो सक्किगोनि।’ लोकप्रिय हास्यटेलिश्रृंखला सक्किगोनिका कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा केही पोस्ट अपलोड गर्नै हुन्न। यस्तै, प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्छ। कतिपय दर्शकले पाँडे बुढा अर्थात् अर्जुन घिमिरेलाई सक्किगोनि नदेखिए सिरियल हेर्न छोडिदिने घुर्की लगाउँछन् भने कतिपयले उनीबिना सिरियल नै खल्लो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्छन्। अर्जुन लामो समयदेखि सक्किगोनि नदेखिनुको कारण भने पि’डादा’यी छ। झन्डै तीन महिनादेखि आमा अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएका कारण उनी पी’डामा छन्। आमालाई म’स्तिष्कघा’त भएर अस्पताल भर्ना गरिएदेखि सक्किगोनिका मुख्य कलाकारमध्येका एक अर्जुन घिमिरे
बिबाह गरेको ५ दिन नबित्दै सेती नदीमा बुहारी बेप’त्ता भएको खबर सुने पछी …दु:खी हुदै बुवा (भिडियो)
भिडियो हेर्न तल थिच्नुस, टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा ख’सेर आज तनहुँमा एक किशोरी बेप'त्ता भएकी छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ लालिमकी १९ वर्षीया पवित्रा लम्साल बे'पत्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौताराले जनाएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ पुलचोकस्थित सेतीनदी किनारमा रहेको रक गार्डेनमा टिकटक बनाउने क्रममा उनी ख’से’र बे'पत्ता भएकी हुन् । आफ्ना दुई साथीसँग घुम्नका लागि पुलचोक गएकी लम्सालको नदीमा खसेर बेप'त्ता भएपछि अहिले स्थानीयवासी र नेपाल प्रह'रीको सहयोगमा खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौतराका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । घुम्ने क्रममा साथीहरुसँग टिकटक बनाउन नदी छेउमा रहेको ढु’ङ्गा’मा उभिएकी लम्साल अचानक चि'प्लिएर नदीमा खसेको उनीसँगै गएका साथीहरुले बताएको उहाँले बताउनुभयो । लम्साल अचानक चिप्लिएर नदीमा ख'सेपछि उनका साथीहरुले प्रहरीलाई
‘गोरो बच्चा’ जन्मिएपछी परिवारलाई लाग्यो शं’का, सत्य थाहा पाउदा उडायो होश !
बिहारको भागलपुरको जवाहरलाल नेहरू अस्पतालमा एउटा अनौठो बच्चाको जन्म भएको छ। यो बच्चा को रंग पूरै खैरो छ र यसको टाउको को कपाल , आखिभौ समेत खैरो र दुधिलो सेतो छ। बच्चालाई देखेर अस्पतालमा उपस्थित डाक्टरहरु र नर्सहरु पनि सबैजना छक्क परे। वास्तवमा मुगेर कि एक महिला लाई अस्पतालमा राती भर्ना गरिएको थियो । उनको शरीरमा मात्र ६ ग्राम हीमो ग्लोबिन भेटिएको कारण त्यहाँका कनिष्ठ डाक्टरहरुले ती महिलालाई आज राती यहि सुत्नु पर्ने बताए। त्यो बच्चा राती ठीक १२:०० मा जन्मेको थियो र त्यो बच्चाको रुप देखेर वरपरका सबैजना छक्क परे। त्यो बच्चालाई देखेर त्यहाँका मानिसहरु र उसको परिवार यति खुसी छन् कि सबैजना उनीसंग सेल्फी लिन आउँदैछन्। बच्चा को रंग पूरै दूधिया सेतो भएको कारण, यो एक यूरोपीयन बच्चा हो जस्तो देखिन्छ। डाक्टरहरुका अनुसार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कलेजमा खैरो रंगको बच्चा जन्मेको यो पहिलो घ टना हो।
कक्षा १२ को उत्तर पुस्तिका पल्टाउदै गरेको टिकटक पुरै भाईरल बन्यो ! हेर्नुहोस
सबैभन्दा पहिले माथि follow गर्नुस, अहिले टिकटक सबैको लोकप्रिय बनेको छ । आफुमा भएको प्रतिभा देखि लिएर हास्यास्पद भिडियो हालेर धेरै भियुज तान्नेको होडबाजी नै चलेको छ । यस्तै एउटा भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाईरल भएको छ । कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिकाको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा भिडियो भाइरल भएको छ । जसमध्ये एउटामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लेखिएको उत्तरपुस्तिका पल्टाइरहेको सजिलै देख्न सकिन्छ । विद्यार्थीलाई मोबाइल राख्न नपाउने र उत्तरपुस्तिका परीक्षा हलबाहिर लैजान नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि भिडियो कसरी बन्यो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छान बिन गर्ने परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । ‘अब कहाँ र कसले यो भिडियो खिच्यो त्यो हामी छानबिन गर्छौं,’ उनले भने । संक्रमणको जोखिमका कारण दुई पटक स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा बुधबारदेखि शुरु भएको हो । चार हजार ३१५ प
नेपालमै बन्छ थोरै लगानिमा यस्तो आकर्षक घर, यो कम्पनी लाई अाजै जिम्मा दिनुहोस !
सबैभन्दा पहिले माथि follow गर्नुस, कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानलले आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् । बिभिन्न रंगको छाना र वाल २ देखि ६ इन्चीसम्म बाक्लो उत्पादन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। शतप्रतिशत कोरियन प्रबिधि र लगानीमा स्थापना गरिएको सो कम्पनिको उत्पादनहरु भुकम्प प्रतिरोधी,सस्तो ,६० बर्ष टिकाउ हुने जनाइएको छ । ७२ करोड रुपैयाँ अधिकृत पुंजी रहेको सो कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक प्रबिधिद्वारा प्यानल उत्पादन शुरु गरिएको जनाइएको छ । कम्पनिद्वारा उत्पादन हुने छाना र वाल गर्मि क्षेत्रका लागि बरदान हुने जनाइएको छ । सो छानाले ८ देखि १० डीग्रीसम्म तापक्रम रोक्न सहयोग गर्छ। यो प्रविधिले चि
यी ३ काम कुनै पनि महीला र पुरुष दुबैले धेरै बेरसम्म गर्न हुदैन ! नत्र …
यौ’न स’म्प’र्कको बे’ला म’हि’लाहरु किन चिम्लन्छन् आँखा ? यस्तो छ कारण
विदेशमा श्रीमान हुनेका श्रीमतिहरुले एक पटक अ’वस्य पढ्नुहोला !
श्रीमानलाई खुसी बनाउने यस्ता १० टिप्स् !
दही खाने गर्नुभएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला, यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर ! डाक्टरको भनाइ यस्तो छ
वि’वाहपछि च’म्किन्छ यी राशी हुने व्यक्तिको भाग्य !
मन परेको मान्छेलाई फकाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् है उपायहरू
पति-पत्नीको एउटै राशि छ ? यी राशिको हुन्छ उत्कृष्ट जोडी, यी राशीको खराब !
जीवनसाथीका लागि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् यी राशी हुनेहरु !
यी सपना देख्नुभयो भने मिल्छ लक्ष्मी माताको कृपा, चाडै बन्नुहुनेछ मालामाल !
बिहेको भोलिपल्ट बिना मेकअप श्रीमतीलाई देखेपछि पतिले दिए उजुरी…
९ वर्ष अघि बुहारी बनेर भित्रिएकी थिइन्, पेट दुखेर अस्पताल जाँदा खुल्यो उनी त पुरुष रैछन्, चिकित्सक पनि चकित्…..
दैनिक ३ किलो माटो र ढुंगा खाने अनौठो ब्यक्ति हेर्नुहोस् ।
यी ७ चिज मागेर कहिले प्रयोग नगर्नुहोस् नत्र ‘अनिष्ट’ हुन्छ!!
यस्तो बानी भएका केटाहरु हुन्छन धोखेबाज !